The OnePlus 3 bụ igwe kachasị elu dị ka AnTuTu | Gam akporosis
OnePlus nwere Ntinye OTA kwụsịrị nke OnePlus 3 n'ihi nsogbu nrụnye maka ụfọdụ ndị ọrụ nọ na-atụ anya inweta mmelite ndị ahụ na njikwa RAM, ọnọdụ ọhụrụ maka ihuenyo na ihe ngwọta maka nsogbu GPS. A OnePlus 3 nke etinyela onwe ya n'ọkwá ka ọ ghọọ otu n’ime smartphones nwere mmekọrịta kacha mma ọnụahịa mma.
Ugbu a bụ mgbe AnTuTu, ngwá ọrụ benchmarking a ma ama, bipụtara Top 10 smartphones na arụmọrụ maka ọkara nke mbụ nke 2016 na ọ bụ OnePlus 3 na n'elu ndepụta ahụ. Ọ bụ ezie na ọ natawo nkatọ maka nsogbu ndị dị na njikwa nke RAM mgbe ọ na-eji 4 GB naanị, ihe na-eme nke ọma na ekwentị a nke na-enye ya ohere inweta akara kacha mma na AnTuTu.
Ndepụta a sitere na data ndị otu ọrụ buliri site na benchmark rụrụ na mbipute 6 nke ngwa ahụ maka gam akporo. Yabụ data ahụ dabere na uru smartphones ndị na-abịa site na China dịka nke a bụkwa ọrụ ndị China.
Ekwentị niile ị nwere ike ịhụ na listi, ma e wezụga iPhones, nwere n'ime ha Qualcomm Snapdragon 820 mgbawaHa nwere 4GB RAM ma otutu nwere ngosi 1920 x 1080, ewezuga Samsung Galaxy S7 ihu. Nke a na - eme ka anyị mata na ama ama nwere obere ngebichi nwere ike ịtụle nke ọma na AnTuTu ma n'otu oge ahụ anaghị eri batrị dị ukwuu.
Ihe na-adọrọ mmasị ịmara ebe agbapụ na-aga n'etiti njedebe dị elu nke jikọtara ahịa ugbu a na nke ole na ole anyị nwere n'akụkụ ndị a dịka Samsung gara n'ihu na-apụta, nke ga-abụ smartphone amalite na February, na-aga n'ihu na-enye agha zuru ezu ka i si hụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » OnePlus » OnePlus 3 bụ eze ugbu a na AnTuTu
Ejirila eserese oge Google ugbu a na eserese ọhụụ abụọ